Tag: disney ụwa | Martech Zone
Tag: disney ụwa
Ọmụmaatụ 3 dị ike nke otu esi eji teknụzụ mkpanaka ekwentị mkpanaaka iji kwalite ahịa azụmaahịa
Tọzdee, Septemba 16, 2021 Tọzdee, Septemba 16, 2021 Michael Frederiksen
Ulo oru ole na ole na-eji ohere a na-amatabeghị nke ijikọ teknụzụ mgbama n'ime ngwa ha iji bulie ahaziri onwe ya na ohere nke imechi ọrịre ugboro iri site na iji ịbịaru nso na ọwa ahịa ọdịnala. Ọ bụ ezie na ego teknụzụ beacon ruru ijeri US $ 1.18 na 2018, a na-atụ anya iru ahịa US dollar 10.2 ijeri site na 2024. Global Beacon Technology Market Ọ bụrụ na ị nwere azụmaahịa ma ọ bụ azụmaahịa na-azụ ahịa, ị kwesịrị ịtụle ka ngwa
The 12 Brand Archetypes: Kedu onye ị bụ?
Wednesday, May 24, 2017 Wednesday, May 24, 2017 Aha ya bụ Gabor
Anyị niile chọrọ ndị na-eso ụzọ. Anyị na-achọkarị atụmatụ ahịa anwansi ahụ nke ga-ejikọ anyị na ndị na-ege anyị ntị ma mee ka ngwaahịa anyị bụrụ akụkụ nke ndụ ha. Ihe anyị anaghị amatakarị bụ na njikọ bụ mmekọrịta. Ọ bụrụ n’ịchọpụtaghị onye ị bụ, ọdịghị onye ga-enwe mmasị n’ebe ị nọ. Ọ dị oke egwu na ị ghọtara onye akara gị bụ, yana otu ị kwesịrị isi bido mmekọrịta